FAQs - Saka Zvakanaka Fekitori Technology Co.
Hongu, isu tinogara tichishandisa yepamusoro plywood kurongedza kana yakasimba katoni kurongedza kwakakodzera gungwa kana mweya kutakura. Kana paine zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa kubva kune vatengi, zvinogona kukonzera imwezve muripo.
Ndiri kuona mitsara yezvibereko yekambani yako inosanganisira girazi & plastiki, ndezvipi zvigadzirwa zvako zvikuru?
Muchokwadi, yedu mitsara yechigadzirwa yaisanganisira inotevera.
1. Insulated magirazi zviumbu.
2. Yakagadziriswa girazi yekuwedzera zvigadzirwa zvinosanganisira zvikamu zviviri: Refrigeration chikamu & imba uye yekushongedza chikamu chikamu. Refriji chikamu ndecheakasiyana ekuratidzira chikafu & chinwiwa giya / inotonhorera / inotonhorera girazi mikova. Uye imba & chivakwa chekushongedza chikamu ndeche louver girazi windows & madhoo. (Zvinoreva kupindirana kwakapofumadza glazing kana glazing mbiri ne shutter)
3. Insulated girazi inoenderana zvigadzirwa: Plastiki & aluminium extrusion profiles.
Saka magirazi edu & epurasitiki priles ekugadzira mitsara kwete chete inogona kushandira kugadzirwa kwemagonhi egirazi nemafuremu asi zvakare inogona kushanda yakazvimiririra uye kusangana nezvinodiwa chete kune yakamisikidzwa girazi kana maficha zvigadzirwa kubva kune vatengi.